Wasiiro Katirsan Galmudug oo eedayn Xoogan u Jeediyeey Dowladda Farmaajo Sabab ? – Radio Daljir
Wasiiro Katirsan Galmudug oo eedayn Xoogan u Jeediyeey Dowladda Farmaajo Sabab ?
Oktoobar 2, 2017 7:19 b 0
Shalay galinkii dambe waxaa ka dhacay Magaalada Cadaado kulan uu shir gudoomiyanayeey Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, waxaana kasoo baxay Qodobadaan hoos ku qoran oo uu warbaahinta u aqriyey Wasiirka Warfaafinta Galmudug.
Tirsi: WWHDHD/28/17 Cadaado: 01/10/2017
Kulan degdeg ah oo golaha wasirada galmudug
Kulan degdeg ah oo golaha wasirada galmudug ay manta oo ay tariikhdu tahay 01-10-2017 iskugu yimaadeen madaxtooyada Cadado ayey uga hadleen xaladaha siyasadeed iyo amni ee ka jira Galmudug.
Shirka oo uu shir gudoominayey Madaxweynaha DGGM Mudane, Ahmed Ducale Gelle Xaaf ayaa waxaa loogahadlay go’aankii Barlamanka Galmudug ay ku badbaadiyeen Masiirka dowlada taas oo goluhu uu so dhaweeyey xilka qaadistii Gudomiyihii hore ee Barlamanka Galmudug iyo Madaxweyne Kuxigeenkii Hore ee Galmudug.
Sidoo kale waxay goluhu ka hadleen gogosha ay Dowlad goboleedka Jubland u dhigtay Dowlad Goboleedyada si looga arinsado xaladaha siyasadeed ee dalka ka jira. Waxaana goluhu isla garteen in wafdi heer sare ah loo diro shirkaas oo muhiimad gooni ah u leh Dowlada Galmudug.
Golaha wasirada waxa ay ka hadleen faragelinta dowlada federalka ah ku hayso Galmudug, waxayna usoo jeediyeen inay ka shaqeyso midnimada umada somaliyeed isla markaana ay tixgaliso hanaanka Federalka ee dalku uu qaatay taas oo madaxda qaranka ay ka muuqato inaysan ku shaqeyneyn, iyagoo u dhaqmaya in wadanka uu ka jiro xukun kaligi talis ah.
Dood dheer kadib waxaa golaha wasiradu soo saareen:
1.In ay si buuxda u ayideen go’aankii Barlamanka DGGM 30-09-2017 ee ka dhacay xarunta KMG ee cadado.
2.Golaha wasirada waxaa ay ayidayaan go’aanka Maxkamada sare ee galmudug ee ka qadatay kooxdii afgambiga dhicisobay soo abaabushay ee ay ugu yeertay in ay sharciga horyimaadaan.
3.Golaha wasirada waxa ay ka digayaan cawaqib xumada ka dhalan karta in kooxdii laga so abaabulay villa Somalia ay soo saaraan go’aano kale kuwaas oo qalqalin kara amniga.
4.Golaha wasirada waxa ay so dhaweynayaan gogosha kismaayo ee dowlad goboleedka Jubaland u fidisay Dowlad Goboleedyaa si looga wada xaajoodo xaladaha adag ee siyasadeed ee dalku uu wajahaayo kuwaas oo dib u dhac ku keeni kara qorshoyaalkii horumarineed ee la hiigsanayey.
5.Dowlada Federalka ee Somalia waxaa uu goluhu uso jedinaa inay ilaaliso hanaanka federal-ka dalka isla markaana ay ka shaqeyso xasilooni siyaasadeed taas oo dalka u horseedi karta horumar iyo midnimo.
6.Golaha wasirada waxa ay soo dhaweynayaan dadaalka IGAD ee wada hadalka ASWJ iyo Galmudug iyadoo laga codsanayo in la dadajiyo si midnimada iyo wada jirka bulshada Galmudug loo gaaro.
7.Golaha wasirada waxa ay ugu baqayaa Dowlada dhexe iyo saxiibada Dowlad Goboleedyada in galmudug lagu tageero hanaanka sharciga iyo kala dambeynta, isla markaana ay tixgaliso tabashada Dowlad Goboleedyada dalka.
8.Ururka goboleedka IGAD, AU, UNSOM, iyo dhamaan saxiibada beesha calamka waxaa laga codsanayaa inay laba jibaraan taageradooda Somalia iyadoo waliba dalka uu kujiro xalad adag ee abaareed.
9.Saxafada madaxa banaanka ee ka hoolgasha Galmudug waxaa looga digayaa sii deynta wararkasta oo abuuri kara xiisad siyaasadeed ama amni daro isla markaana kasoo horjeeda siyasada Dowlada.
Gudoomiye Ku Xigeenka Kowaad ee Barlamaanka Somaaliya oo la Kulmay Wafdi Kasocda Turkiga (Sawiro)
Jubbaland oo Baaraysa Duqaymo kadhacay Gobalka Gedo